Indawo encinci yePaki
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguAmanda
Iibhloko ezi-2 ukusuka edolophini! Indlu yeendwendwe enegumbi lokulala eli-1 (ukumkanikazi) kunye nesofa eyongezelelweyo yokulala entliziyweni yesithili sembali saseLaurel. Ikhitshi eligcweleyo w / uluhlu olungenasici kunye nefriji, indawo yokungena yabucala, i-wi-fi, intambo, indawo yokupaka egciniweyo kunye nomtsalane omninzi! Hamba uye kwindawo zokutyela edolophini, iivenkile kunye neMyuziyam yaseLauren Rogers. Ihlala kwisitrato esinendlela enye ejonge eGardiner Park.
Nokuba usedolophini ubusuku obunye okanye inyanga enye okanye ngaphezulu, qiniseka ukuba uya kuba nekhaya elitofotofo kude nekhaya. Ibekwe kwenye yeendlela zembali kaLaurel, iLittle Park Indawo inendawo yokuhlala ebanzi kunye negumbi lokulala. Ukuba ukhetha ukungena kwisidlo, uya kuba nokufikelela kwikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Indawo yangaphandle enomtsalane ejonge ngaphaya kweGardiner Park ibonelela ngendlela efanelekileyo yokuphumla ngorhatya lwaseMississippi.
Uzibhloko ezimbini kuphela kude nedolophu yaseLaurel eyimbali-ikhaya kwezinye zezona venkile zibalaseleyo zaseMississippi, iindawo zokutyela kunye nezinto ezinomtsalane. Ngaphantsi kwebhloko yiMyuziyam yaseLauren Rogers yoBugcisa-ihlonitshwa rhoqo njengenye yeemyuziyam ezilungileyo kwiSitatimende saseMagnolia. Kwaye inika iiyure ngeCawa emva kwemini - 1-4 PM. U-Laurel ude abe nendawo yokusela utywala ebamba umculo ophilayo phantse yonke impelaveki, kwaye uqikelele ukuba, zibhloko nje ezimbalwa kude. I-Gardiner Park isondele ngakumbi, ngokoqobo kanye kumnyango wangaphambili, ukuba ufuna ukwenza isibini esijikelezayo sijikeleze umzila. Abamelwane bethu ngamanye amakhaya eminyaka eyi-100+, ke thatha uhambo phezulu kwaye uhle kwii-Avenues ze-4 ukuya kweyesi-7 ukuze ubone ngakumbi ukuba kutheni iLaurel yaziwa njengeSixeko Esihle.
Nceda undazise ukuba singakuphucula njani ukuhlala kwakho! Ukuba ujonge uncedo lokucwangcisa uhambo lwakho okanye izibonelelo ezongezelelweyo, undazise!
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R2390